अनुष्काले खोलिन् विराटसँग विवाह गर्नुको रहस्य —
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ११:०७ admin	0 Comments
यो पनी पढ्नुहोस्ः इन्डियामा भाइरल भयो ३ बच्चाले गाएको नेपाली गीत, अभिनेता अनुपमले भने यस्तो !
बलिउड अभिनेता अनुपम खेर सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छन् । उनी आफ्नो फ्यान्स माझ चर्चामा रहिरहन पछिल्लो समय रोचक पोस्ट गरिरहन्छन्। अनुपमको बच्चाहरुसँग खास लगाव छ र उनी सामाजिक सञ्जालमा बच्चाहरुसँग सम्बन्धित पोस्ट गरिरहन्छन्।
हालै उनले सडकमा गीत गाइरहेका तीन बच्चाको अत्यन्तै क्युट भिडियो शेयर गरेका छन्। ती बच्चाको समूहलाई अनुपमले ‘बेस्ट म्युजिक ब्याण्ड’ बताएका छन् र आफ्नो तर्फबाट अवार्ड पनि दिएका छन् ।
यो भिडियो शेयर गरी अनुपम खेरले लेखेका छन्-
‘सबैभन्दा बेस्ट म्युजिकल ब्याण्ड !! म यिनलाई वर्ल्ड टूरमा लैजान चाहन्छु। मेरो विचारमा यी बच्चाहरुले अस्पष्ट उच्चारणमा आशा र सधैँ एक राम्रो समयको सम्भावनाबारे गाइरहेका छन्। मलाई लाग्छ यो गीतको शब्दले दुनियाँ अहिले जुन कठिनाईबाट गुज्रिरहेको छ त्यसबारे बताईरहेको छ । तर शायद हामी सबै ठिक हुनेछौँ।
सबैभन्दा उत्कृष्ट गीतको मज्जा लिनुहोस् । म यिनलाई ग्रामी अवार्डको लागि नोमिनेट गर्न चाहन्छु र यिनलाई विजेता घोषित गर्छु । तपाई पनि सहमत हुनुहुन्छ नि ?’
यो पनी पढ्नुहोस्ः यि हुन् २०२१ मा बिहे गर्ने योजनामा रहेका बलिउड सेलिब्रेटी…
काठमाण्डौं । कोरोनाका कारण सन् २०२० सबैको लागि सकसपूर्ण रह्यो । आफूले योजना बनाए अनुसार कसैले पनि काम गर्न सकेनन् । धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरुले २०२० मा विवाह गर्ने योजना बुनेका थिए । तर कोरोनाका कारण योजना सफल हुन सकेन ।
← इन्डियामा भाइरल भयो ३ बच्चाले गाएको नेपाली गीत, अभिनेता अनुपमले भने यस्तो !
पाथिभरा मताको दर्शन गरी चैत्र २९ गते आईतबारको राशिफल पढ्नुहोस् →
यि सुपरस्टारले मिलाइदिए कपिल र सुनिलको झगडा, ‘कपिल शर्मा शो’ मा एकपटक फेरि देखिदैँ…
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०७:५६ admin	0
विवाह नगर्दै सँगै बस्थे यी कलाकार, तर विवाह नहुँदै छुट्टिए !
४ चैत्र २०७७, बुधबार ०२:३४ admin	0
द’र्शकलाई फिटिक्कै मन परेका थिएनन् यी बलिउड जोडीहरु !
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०७:४८ admin	0